Rehefa hariva efa maizimaizina, raha sendra tara fodiana ity mpitandrina iray, no indro tazany eo amin’ny sisin-dalana ity mpivavaka iray ao amin’ny Fiangonany, manatsofoka vola ao amin’ny makarakara eo amin’ny “dalle”, sady efa mamo.
Ary inona no ataonao eto ry Albert?
Manao asa fiantrana aho Pastera a! Ianao nilaza fa izay ataon’ny tananao ankavia, aza atao fantatry ny tananao ankavanana, tsy misy mahalala ary tsy misy mahafantatra mihitsy izao asa soa ataoko izao. Manatanteraka izay lazain’ny toriteninao aho!
Ity mpampianatra iray dia nampianatra ny mpianany ary nanitrikitrika fa tsy misy izany fahagagana izany:
Hitanareo rankizy, raha hiampita ny ranomasina mena ny zanak’Isiraely, Mosesy moa olona mahay rano tsara, efa fantany ny toetr’andro, ka ilay fotoana nandrivotra be iny, dia nitsoka mafy ny rivotra avy any andrefana sy atsinanana, dia nisintona ny ranomasina ary tsy nisy afa-tsy eo amin’ny 10 sm eo sisa ny hahavon’ny rano. Dia niampita ny Zanak’Isiraely!
Dia nisy mpianatra iray niantsoantso sady nihorakoraka nanao hoe:
Fa inona lehity ity mahazo an’ialahy a! hoy ny mpampianatra sady tezitra.
Fahagagàna, rano 10 sm dia nahasempotra ny miaramiala egyptiana rehetra ka nahafaty azy!